More uye mamwe mabhizimisi kuvandudza kwavo rengarava zvakanaka uye zvine musoro kuronga motokari dispatchingwith Fleet Management System, izvo kwete chete zvakanyanya runovimbisa kuchengeteka motokari uye zvinokosha, asi kunoderedza woshanda mari.
We vagovane Fleet Management migove mitatu: vanhu, motokari uye cargos. The "Vanhu" pano rinobatanidza vatyairi uye passengers.We anogona zvakanaka anotarisira motokari kuita uye achidzinga nguva kwavatariri pamwe inobudirira mubatanidzwa RFID michina, kamera uye GPS inouraya. Uyewo tinogona zvakanyanya pave vakachengeteka kwavatariri pedyo chenjedzo uye zvashata okuzvidzivirira.
Fleet Management: Tinogona chamber Informations siyana pamusoro motokari munguva chaiyo, uye kupa vatengi pamwe yakarurama mubvunzo basa motokari 'location.The motokari inogona zvakanyanya vakatuma pashure achiziva zvakajeka chipo kufamba nemotokari. Uyewo tinogona zvakajeka kuziva kwerunyararo mamiriro motokari. Tinogona kuita nzira-kuronga kuti motokari pachine, uyewo kuti uchida zvifambiso urongwa zvakanaka.
Chakanaka Management: Monitor inoyerera ezvinhu Mobile twa munzira Via kamera michina, musuo rinobva induction michina, nedanda-Bumbiro kushanda pakuvheneka michina, RFIDtechnology, GPS michina, Wireless hutachiwana michina, nezvimwewo, kuitira kuti vabudirire chinobudirira pakukurukura utariri, izvo anogona zvinobudirira kunzvenga kuti zvinokosha ndeizvi vakaba, kubirwa uye vakarasika.
efficiencies uye profitability
basa uye ngozi
1.The kutarisirwa kuchikuva anotsigira 10 languages2.Real-nguva zvichiongororwa uye nhoroondo Tracking review3.Route yekuronga / remunharaunda yekuronga 4.Vehicles kushanda anoshuma 5.Real-nguva okuzvidzivirira uye Alarm mishumo.
Zvakafanira enzanirana Hardware Products
Details kuona unhu, wevasungwa anowisira muchiso